थिकुङ जेनेरेल जीबी मिनवेरिङ-को 193औँ जन्मजयन्ती पालन, लेप्चा भाषाले संवैधानिक मान्यता पाउन जरूरी : इल्टा - खबरम्यागजिन
Homeखबरदार्जीलिङथिकुङ जेनेरेल जीबी मिनवेरिङ-को 193औँ जन्मजयन्ती पालन, लेप्चा भाषाले संवैधानिक मान्यता पाउन जरूरी : इल्टा
July 18, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि दार्जीलिङ, मुख्य समाचार 0
दार्जीलिङ, 18 जुलाई।
पहाड़को पुरानो लेप्चा भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिलाउनको निम्ति इन्डिजिनियस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएशनले नयाँ पहल शुरू गर्ने भएको छ। जसको निम्ति धेरै अघिबाट कार्य भइरहेको जनाउँदै अब योजनावद्ध रूपमा कार्य गर्दै अघि जाने घोषणा इल्टा अध्यक्ष दोर्जी टी लेप्चाले आज गरेका छन्। लेप्चा भाषाको पहिलो व्याकरण लेख्ने थिकुङ जेनेरेल जीबी मिनवेरिङको 193औँ जन्मजयन्ती आज प्लुङदुङमा पालन गरियो। जहाँ भेला भएका भाषाविद्हरूको उपस्थितिबीच लेप्चा नेतृत्वहरूले पहाड़मा राजनैतिक हस्तक्षेपको कारण भाषा पढाउन नपाएको मुद्दालाई घरि घरि उठाएको देखिन्थ्यो।
गोजमुमो विमल गुरूङको नेतृत्वमा पहाड़को सत्ता रहँदा राज्य सरकारले जारी गरिसकेको अधिसूचना पनि अवहेलना गरेर पहाड़का 46 प्राथमिक पाठशालाहरूमा लेप्चा पारा टिचरको नियुक्ति रोकेको थियो। जसको कारण सय दिन अघि शिक्षकहरू यहाँको त्रिकोण पार्कमा धरनामा बसेका थिए। अहिले विमल गुरूङको प्रभुत्व दार्जीलिङमा छैन। यस्तोमा नयाँ गरी उक्त मुद्दा फेरि चर्केर आएको छ। सोही अवसरबीच लेप्चा भाषालाई स्कूलमा पढाइनुपर्ने सँगै संविधानको आठौँ अनुसूचिमा अन्तर्भुक्त गरिनुपर्ने माग इल्टाले अघि ल्याएको छ। सोही विषयमा जोड़ दिँदै इण्डिजिनियस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएशनले भारत सरकारसमक्ष लेप्चा भाषालाई संविधानको आठौँ अनुसूचिमा अन्तर्भुक्त गरिनुपर्ने माग गर्दै यसको निम्ति पहल नै शुरू गर्ने घोषणा गरेको छ।
इल्टा अध्यक्ष दोर्जी टी लेप्चाले भने, दार्जीलिङमा लेप्चा भाषाको निम्ति अधिसूचना जारी भएर पनि प्राथमिक तहको पढाइलाई राजनैतिक हस्तक्षेप गरियो। जसको कारण हाम्रा नानीहरू आफ्नो भाषाको पढाईदेखि वञ्चित बन्न परिरहेका छन्। अब हामी लेप्चा भाषालाई आठौँ अनुसूचिमा अन्तर्भुक्त गर्नको निम्ति भारतभरिका लेप्चाहरूलाई एक हुने आह्वान गर्छौं। यसको निम्ति हामीले काम थालिसकेका छौं। केन्द्र सरकारलाई लिखित रूपमा अवगत गराइसकेका छौँ। भाषा मान्यताको निम्ति पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी र सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चामलिङलाई पनि सहयोगको अपील उनले आज गरेका छन्।
यता एमएलडीबी अध्यक्ष ल्याङसोङ तामसाङले पनि लेप्चा भाषाको पढाईमा भएको राजनैतिक हस्तक्षेपको निन्दा गर्दै यसलाई सुचारू गरिन नितान्त जरूरी रहेको बताए। उनले संविधानको 350 ए अन्तर्गत कुनै पनि जातिले आफ्नो मातृभाषा पढ्न पाउनुपर्ने अधिकार रहेको भन्दै दार्जीलिङ कालेबुङका लेप्चाहरू यसबाट वञ्चित रहेको गुनासो गरे। उनले भने, राज्य सरकारमार्फत लेप्चा भाषाको हितमा धेरैवटा कार्य भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको पहल सराहनीय छ। जसको कारण लेप्चा भाषाको संरक्षण र विकासमा धेरै कार्य भइरहेको छ। पुस्तकहरू लगातार प्रकाशित भइरहेका छन्। अनुवादको कामहरू हुँदैछ। 150 रात्री पाठशाला बनिसकेको छ।
अध्यक्ष तामसाङले पहिलोचोटि लेप्चा भाषाले इन्टरनेशनल कोलकाता बुक फेयर 2019 मा समावेश हुने अवसर पाएको जानकारी पनि गराए। सो अवधि लेप्चा भाषामा लेखिएको6वटा पुस्तकको पनि लोकार्पण गरिएको थियो। प्रोफेसर प्रकाशचन्द्र पटनायक, मोडर्न इन्डियन ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिटरेचर दिल्ली विश्वविद्यालय एमएलडीबीका सदस्य सचिव जी नाम्चू आइएएस, डा. सतारूपा दत्ता, मजुन्दर शाह, फादर फिलिक्स डिसोजा, रेन डेनिस लेप्चा, प्रो. बरूण मुखोपाद्याय, डा. डीसी रोय, डा. नन्दनी भट्टचार्य पान्डा, श्यामेल लेप्चा आदिले कार्यक्रममा आफ्नो वक्तव्य राखेका थिए। इल्टा महासचिव रूमदेन लेप्चाले स्वागत भाषण राखेको उक्त कार्यक्रममा एमएलडीबी सांस्कृतिक विभाग, आथिङ केपी तामसाङ लेप्चा स्कूल र रेन माइकल वे गीतडाब्लिङ स्कूलका कलाकारहरूले सांस्कृतिक प्रस्तुति दिएका थिए।